Firenena Eropeanina : mitady fomba hahazoana an’i Afrika - Informations et Actualités sur Madagascar
Economie Firenena Eropeanina : mitady fomba hahazoana an’i Afrika
Firenena Eropeanina : mitady fomba hahazoana an’i Afrika
by Alpha world on 09 h 27 in Economie
Mikatsaka mafy ny fomba hahazoana ny fon’i Afrika ny Eoropeanina. Raha ny zava-misy anefa, tsy tanteraka ny kajy nataon’ireo firenena ao anatin’ny Vondrona
eorpeanina (UE), manoloana ny fisian’ny firenen-kafa, toa an’Etazonia, ny firenena matanjaka hafa sy/na vao misondrotra, toa an’ireo faritana hoe Brics (Brezila, Rosia, India, Sina, Afrika Atsimo). Miaiky anefa ny UE fa mpiara-miombona antoka tsy azo ihodivirana i Afrika, saingy mila hatsaraina ny fiara-miasa. Niaiky i Eoropa fa tsy ampy intsony ny fijerena ny lafiny politika sy diplomasia, fa tokony hifantohana bebe kokoa ny ara-toekarena, indrindra ny lafiny indostria.
Eo amin’ny lafiny fotodrafitrasa, ohatra, ilana tetibola hatrany amin’ny 100 miliara dolara i Afrika. Nahatratra 43 miliara dolara ny fampiasam-bolan’ny mpandraharaha tsy miankina (IDE).
Notsorin’ny UE fa tokony hahitsy ny paikady hiaraha-miasa amin’ny firenena afrikanina, ka tokony homen-danja kokoa ny sehatra tsy miankina. Ao anatin’izany ny fanohanana azy ireo ara-bola, ny fanomezan-danja ny mpiasa afrikanina, ny tohana amin’ny fampindramam-bola, ny fitantanana ny asa manasoa ny vahoaka ary indrindra, ny fametrahana ny fitantanana mangarahara. Ao anatin’ity farany ny ady amin’ny kolikoly sy ny fanomezana tsena tsy ara-dalàna, izay tombanana hatrany amin’ny 840 miliara dolara tato anatin’ny 40 taona.
By Alpha world at 09 h 27